musha / Interior design / Iyo Yakazara Maitiro eSoft Furnishing Yakazara Projekiti, Inofinhwa neVashoma Vanhu!
2021 / 06 / 20 kupatsanuraInterior design 6591 0
Parizvino, iyo nyika ingangoita yakafanana nzvimbo kurongedzwa uye kushongedzwa kwemukati. Ivo vadiki vanogara mairi vachanzwa zvakanyanya kana kushoma kusagadzikana, mushure mezvose, mararamiro emunhu wese akasiyana. Naizvozvo yakasarudzika tsika yakapfava yekugadzira chirongwa chakakosha, saka sei chaizvo chirongwa chakapfava chekupa?
Nhasi tinogovana nhanho yekunyorovera yekugadzira dhizaini dhizaini, iri inokodzera vanogadzira zvigadzirwa zvakapfava.
Kutanga nzvimbo kuyera
Sekondari nzvimbo kuyerwa
Kutanga kunyorwa kwechirongwa
Saina chibvumirano chekugadzira
Ruzivo rwekumba kuunganidzwa
Yekupedzisira chirongwa kusimudzira
Sarudza zvigadzirwa zvepamba
Saina chibvumirano chekutenga
Chigadzirwa re-chiyero usati waenda mukati
Ku-saiti kuisirwa uye kuiswa
1. Kutanga nzvimbo kuyera
Tools: mutongi, kamera
Nzwisisa chiyero chemuchadenga, rakaoma kupa hwaro
Edza saizi, buda nepurani yepasi, kukwevera kudhirowa.
Maonero akafanana (makuru makuru)
Maonero eAngle (zvidiki zvidiki)
Node (tarisa pane yemuno)
chitsamba: Kuyerwa kunoyerwa mushure mekumisikidza kuisirwa, mukufungisisa kwezvigadzirwa zvemumba kune zviyero zvemukati kuti ubate chaizvo.
2. Positioning mararamiro
urongwa: Pre-kutaurirana kwakakosha, edza kutora zvakadzama zvemutengi zvinoda mapoinzi, anogona kuwanikwa kubva kune anotevera maficha.
Spatial kuyerera mutsetse (mbishi basa mutsara) - ergonomics.
chitsamba: Spatial kufamba mutsara ndiyo kiyi yekuisa fanicha.
Ruzivo rwekuzvivaraidza, tsika, chinzvimbo uye ruzivo, mutsika kuravira uye hupenyu maitiro.
3. Ruvara zvinhu
urongwa: Ruvara mutauro usingatauri, uchiendesa ruzivo rwakasiyana uye manzwiro kuvanhu.
Bata rwiyo rwemavara mune toni yeiyo huru vara rekushongedza kwakaomarara, kuchengetedza kubatana kwetoni hombe uye musiyano wezvemuno ruzivo.
Bata hukama hukuru hutatu hwemavara: ruvara rwemberi, ruvara rwemberi, kushongedzwa kwemavara, uye hukama hwakaenzana pakati pavo.
chitsamba: Kana uchiita zvakapfava kushongedza dhizaini, iyo hukama hwehukama inofanirwa kutsunga kuzadzikisa zvese kubatana uye shanduko uye kusangana nezvinodiwa zvehupenyu.
4. Maitiro echimiro
Kutaurirana nevatengi kuti ndeapi masitayera avanoda, ingave yeMediterranean maitiro kana nyowani Chinese maitiro, nezvimwe.
Zvichienderana nemhando yemidziyo yakaoma, zviitire wega, kuunganidza nodhi dzakaomarara (pikicha).
urongwa: Iyo dhizaini inosanganisa ari pamusoro mana maratidziro ekutanga marongero epurani sketch.
Iwo mafoto zvinhu akapfupikiswa uye akaongororwa, uye yekutanga sarudzo yezvigadzirwa zvemumba. (fenicha yemucheka, zvekuvhenekesa zvishongedzo, pendi nemaruva, zvinodikanwa zvezuva nezuva, zvakapfava zvekushandisa)
chitsamba: Kurongeka kwekuyera kwekutanga kunoita basa rakakosha mukutanga kwekubata.
6. Sekondari nzvimbo kuyerwa
urongwa: Iyo dhizaini inotora yakakosha fomati fomati kune saiti, inowanzo tarisa uye kugadzirisa iyo ruzivo.
Chigadzirwa size saizi, kunyanya fanicha, kuratidza zvizere kubva pakureba, hupamhi uye nekukwirira, uchidzokororazve kunzwa kusagadzikana kwenzvimbo.
07. Kutanga kunyorwa kwechirongwa
urongwa: zvinoenderana neyakagadzirwa imba dhizaini yekugadzira chirongwa, teerera kuhuwandu hwehukama hwechigadzirwa (fenicha 60%, machira 20%, imwe chikamu chakaenzana 20%).
chitsamba: Kana iwe uchangotanga kudzidza nezve zvishongedzo, zvirinani kugadzira 2-3 seti emapurogiramu kuitira kuti vatengi vave nesarudzo.
08. Saina chibvumirano chekugadzira
urongwa: Saina iyo yakapfava yekugadzira dhizaini chibvumirano mushure mekutanga chirongwa chakasimbiswa nemutengi.
Chekutanga dhizaini dhizaini: 60% yeiyo yakazara dhizaini dhizaini ichabhadharwa, uye iyo yekuyera fizi ichaverengerwa mune yekutanga dhizaini dhizaini. Mazuva matatu ekutaura kusagutsikana nehurongwa hwekutanga, iyo yekutanga dhizaini inogona kudzoserwa zvizere mushure mekubvisa iyo yekuyera fizi uye kudzima chibvumirano.
09. Ruzivo rwekumba kuunganidzwa
Sarudzo yeBrand (kuongorora musika)
Customization: bvunza mutengesi kuti ape CAD vanodhirowa, chigadzirwa chinyorwa, chitaurwa.
2. Mucheka, zvakapfava kuisirwa zvinhu kusarudzwa: chigadzirwa kuongorora
(Iyo chaiyo odhiyo ndeye: fenicha - mwenje uye machira - pendi, maruva art, zvishongedzo, nezvimwewo)
10. Yekupedzisira chirongwa kusimudzira
urongwa: Pamusoro pechirongwa chekumisikidza uye mutengi kuti awane kubvumidzwa kwekutanga, kuburikidza nekugadzirisa kwechigadzirwa, jekesa muchirongwa ichi mutengo wechigadzirwa chimwe nechimwe uye musanganiswa wemhedzisiro. Zvinoenderana neyakagadzirwa imba dhizaini yekugadzira chirongwa, kuunzwa kweiyo yakakwana chishongedzo dhizaini chirongwa.
chitsamba: Ichi chinongedzo chirongwa chepamutemo pasi pechinangwa chechirongwa chekutanga kuti uwane mvumo yekutanga kumutengi, inogona kuitwa pasi pechirevo chevara, dhizaini, chigadzirwa, kuzivikanwa kwemhando mbiri mafomu ekoteti (yepakati-renji, a yepamusoro-kumagumo), kuitira kuti vatengi vave nemuganhu wekugamuchirwa.
11. Tsananguro yechirongwa
urongwa: Ipa vatengi sisitimu yakarongeka uye izere yechirongwa chepamutemo, uye muchiitiko chekuunza mhinduro inoramba ichienderera pane zvakataurwa nevatengi, kuitira kuti danho rinotevera rekugadzirisa chirongwa, kutsvaga maonero enhengo dzese dzemhuri, kupfupikisa.
chitsamba: Iyo yakanaka chirongwa inoverengera chete makumi matatu kusvika makumi mana emapoinzi, mamwe makumi matanhatu-30 mapoinzi anoenderana nekutaura kunoshanda kwemugadziri. Gadzirira nokungwarira uye nyatso rongedza usati waunza chirongwa ichi.
12. Chinja chirongwa
Maitiro: Mushure mekutsanangurwa kwechirongwa nemutengi, chirongwa ichi chichagadziriswa mukupindura mhinduro kubva kumutengi. Kusanganisira kugadziridza kwemavara, dhizaini kugadzirisa, kugadzirisa kwezvinhu zvekuwanza, uye mutengo wekugadzirisa. Kuongorora kwakadzama kwekunzwisisa kwevatengi chirongwa ichi.
Ongorora: Paunenge uchigadzirisa chirongwa, mugadziri haafanire kuteerera kune mutengi maonero e100%, asi shandisa yake yega yehunyanzvi maonero kutsanangura tsananguro uye kutaurirana kugadzira chirongwa chinoshanda.
13. Sarudza zvigadzirwa zvepamba
urongwa: Usati wasaina chibvumirano chekutenga nemutengi, tendera mutengo uye kuongororwa kwezvigadzirwa nemugadziri wechigadzirwa chemba, uye wozoona zvigadzirwa zvemumba nemutengi, uchizvisimbisa chimwe nechimwe zvinoenderana nerondedzero muchirongwa chekuwanira.
Furniture brand zvigadzirwa, tanga watora mutengi semuenzaniso wekumisikidza, zvigadzirwa zvetsika, iye mugadziri anofanira kubvunza mugadziri wemadhirowa eCAD uye mechi muchirongwa.
chitsamba: Iyi link ndiyo kiyi yechirongwa chekuwana, ichipa hwaro hwechibvumirano chekutenga gare gare.
14. Saina chibvumirano chekutenga
urongwa: Saina chibvumirano chekutenga nemutengi, saina chibvumirano chekupa nemugadziri
Saina chibvumirano nemutengi, kunyanya chetsika fenicha chikamu, kuwedzera mazuva gumi nemashanu pamusoro penguva iyo mugadziri anovimbisa kuendesa.
Kusayina kontrakiti nemugadziri wefanicha pamwe nekugamuchirwa kwekutanga mushure mekugadzirwa kwemashanga fenicha yapera.
Mugadziri anofanirwa kuenda kufekitori kunoongorora midziyo isati yapendwa, izvo zvinhu, maitiro ekuchengeta musuwo.
15. Kutenga zvigadzirwa
urongwa: iri mumutengi mushure mekondirakiti, zvinoenderana nehurongwa hwekugadzira hwerudzi rwekutenga nekugadzirisa zvigadzirwa zvekuwedzera. Kazhinji, midziyo iri muzvinhu zvekushandisa inotsanangurwa uye inotengwa kutanga (mazuva 30-45). Yechipiri ndeye machira uye zvakapfava zvekushandisa zvekushandisa (mazuva gumi), uye zvimwe zvekushandisa zvinofanirwa kuve zvakagadziriswa kana zvichidikanwa kuti utarise nguva
16. Chigadzirwa re-chiyero usati waenda mukati
urongwa: Kana fanicha yave kuda kubva kufekitori kana kutumirwa kune saiti, iyo dhizaini inofanirazve kuyera nzvimbo saiti, yaona saizi yemidziyo nemachira uye nezvimwe zvinogamuchirwa panzvimbo iyi.
chitsamba: Ichi ndicho chipingaidzo chekupedzisira muchigadzirwa mumunda, kana paine matambudziko anogona kugadziriswa.
17. Ku-saiti kuisirwa uye kuiswa
urongwa: Semugadziri munyoro wekugadzira, kugona chaiko kwekuisa zvigadzirwa kwakakosha zvakafanana.
Kazhinji ichagadziriswa maererano nehurongwa hwezvinhu zvakapfava zvekushandisa - fenicha - machira - pendi - zvishongedzo, nezvimwe Kuiswa. Imwe nguva kana chigadzirwa chasvika, dhizaini achange ari iye pachezvake mukuiswa.
chitsamba: kushongedzwa kwakapfava hausi murwi wezvinhu, ndiko kugadzirisa hupenyu. Iko kusanganiswa kwezvinhu zvekushandisa zvinofanirwa kuiswa nekufungisisa kuzere kwehukama pakati pezvinhu uye maitiro ehupenyu hwemuridzi.
Yese yekuchenesa imwe mushure mekupedza nyoro yekumisikidza kumisikidza. Kudzoka kwekushanya kwekutevera, kuongororwa kwewarandi uye kugadzirisa dhirivahari.
Ehezve, izvi ndizvo chete zvekutanga maitiro, kana iwe uchida kudzidza imwe yehunyanzvi yakapfava yekugadzira dhizaini yakagadzirirwa, zvinokurudzirwa kunyoresa mukirasi sisitimu yekudzidza.
Tagmidziyo yakapfava Pakapfuura :: Embroidery, Maruva Uye Shiri, Chinese Kupenda, Hazy Jiangnan Flavor︱NoneZone Dhizaini Zvadaro: 58m2 Yakavhurika Kamuri Dhizaini, Yechidimbu "Mukaka Tea" Chimiro, Super Chimiro!
2021 / 08 / 15 5746
2021 / 08 / 14 6369